Isendlalelo nefomu emibhalweni. Esikushoyo nokuthi sikusho kanjani. | Izincwadi Zamanje
Namuhla ngizobhekana nendaba okuthi, yize ibalulekile kubo bonke ubuciko, ezincwadini kakhulu ngenxa yezici zayo: Ngibhekisa ekuphikiseni nobudlelwano phakathi el ingemuva y la indlela.
1 Isendlalelo nefomu
2 Amagama angasho lutho
3 Ukujaha iphupho
Uma bengifuna ukuchaza lawa magama kalula futhi ngokushesha, bengingakusho lokho el ingemuva yilokho esikushoyo, futhi indlela sikusho kanjani. Umqondo ofanayo ungabanjwa emakhasini amabili noma amakhulu amabili, ngendlela efanayo nendlela indaba exoxwa ngayo ezoba nomthelela endleleni esiyibona ngayo. Lokhu kubaluleke kakhulu ezincwadini, ikakhulukazi ekulandiseni.
La indlela Yincwadi yakho eyisembozo phambi komfundi, into yokuqala ezomngena ngaphambi kokuba angene ngokuphelele embhalweni wakho. Ungayinaki i- indlela kufana nokuphuma ukuyodla isidlo sakusihlwa nentombazane efake i-tracksuit efanayo oyigqokayo ngokugijima. Cishe akafuni ukuyiphinda, kanjalo nomfundi wakho. Kunezibonelo eziningi zokuthi ungazinaka kanjani kulesi sici, kusukela kokuyisisekelo njengokwenza amaphutha esipelingi, noma izinkathi ezididayo, kuya ezintweni ezithile njengokuhlukumeza izandiso, imilolotelo yangaphakathi, njll. Ngenhlanhla kunendlela enempilo kakhulu yokulungisa lokhu: ukufunda okuningi nakho konke. Ngeke nje ukwazi ukwandisa ulwazimagama lwakho ukuze ungasho ukuthi kukhona okuthile engachazeki, kepha uma ufunda abanye ababhali ngokucophelela, bese uqaphela ukuthi kanjani induna imibhalo yabo, uzobona ukuthi kungani babhala nokuthi babhala kanjani.
Amagama angasho lutho
Yize kungekho kungabaza ngokubaluleka kwe- indlela, lokhu kufaka ingozi enkulu: i-syndrome yamagama angenalutho. Ngiqonde lezo zinkondlo eziphelele ngokomthetho, kepha ezingenangqondo nezingenamphefumulo, noma lezo zincwadi lapho umbhali kubonakala sengathi uzama njalo ukukhombisa ukuthi mkhulu kangakanani ngokubeka amagama ngokulandelana. Iseluleko esisodwa: uma ungenalutho ongakusho, ungakusho, ngoba noma ngabe uhlakaniphe kangakanani, futhi noma ngabe usebenzisa izingathekiso ezimnyama kangakanani, umfundi uzoyivala incwadi yakho kungekudala.
Uma uzibonile kule misho, ungalilahli ithemba, ukuthi kukhona ikhambi elilula: cabanga ukubhala kuphela lokho ongathanda ukukufunda. Lo mbono ungisindise kaningi ekuweleni ekuziphatheni okuthuthukile nasekufundiseni ngemibhalo, futhi ngicabanga ukuthi noma ngubani angakusebenzisa ukuze azihlulele. Umugqa omuhle phakathi kombhalo oyinkimbinkimbi noweVulcan kulula ukuweqa; noma, ngakolunye uhlangothi, ungesabi ukubhala okuthile okunzima. Awudingi ukubhala nge-syntax eyisisekelo nesilulumagama esilinganiselwe ukuze abantu bakuqonde futhi bakufunde, noma ngabe ungenza ubuwula obuningi ngalezi zinsizakusebenza ezimbalwa kunokuba ungacabanga. Ama-ambiguities, isilulumagama esinothile, ukutolika okuningi, njll. zivame ukuba uphawu lwezincwadi ezinhle. Inkinga kuba lapho uzama ukudlulisa lolu usawoti kanye nopelepele ngesitsha esikhulu.
Ngokuqondene ne ingemuva, lapha akukho ukuvula ikhasi: noma lokho okutshelayo kuyathakazelisa noma ngeke bakufunde. Kulula njengalokho. Akunandaba ukuthi ubhala kahle kangakanani, ngeke unqobe muntu ngalokho. Kuyathakazelisa ukuthi leli cala eliphikisayo lingenzeka, ngoba abanye ababhali abangenawo amakhono ezintweni ezisemthethweni, bakwenzela uzamcolo omkhulu wemicabango nemibono emihle. Kepha lokhu akusona izaba: ukuthi abambalwa bangaphumelela kanjena akusho ukuthi nathi kufanele senze okufanayo. Into ejwayelekile ukuthi incwadi ebhalwe kabi ayinconywa kahle.
Ukufingqa, futhi ekugcineni: okubaluleke kakhulu, phansi o isimo? Into ehlakaniphe kunazo zonke, njengezinye izinto eziningi kangaka kule mpilo, ukucabangela lokho okushiwo yifilosofi: Ubuhle buphakathi. Ukubhala kahle, kufanele ugcine ibhalansi phakathi kwalokhu okubili, ngoba kulula kakhulu ukugxila kokukodwa. Noma ngabe ikuphi, thokoza! Yini ukubhala kufanelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Isendlalelo nefomu emibhalweni. Esikushoyo nokuthi sikusho kanjani.
Ngiyithandile indlela ochaza ngayo lemiqondo, ngeke ngiyikhohlwe. Ngiyabonga! Ube wusizo, ubucabanga ukuthi ngizophasa isivivinyo sami.
Ngithanda kakhulu izincazelo ezingemuva nangendlela lapho kubhalwa, kukwenza kube lula futhi kuqondakale kalula. Kuyinto enhle kakhulu.
Incazelo enhle kakhulu bengilokhu nginokungabaza kwami ​​mayelana nalolu daba, kodwa ngenxa yakho bengicacile.
Indlela eqondakalayo yokubhala, ngiyabonga ngomsebenzi wakho, ekugcineni ngiwazwisisile la magama amabili.
Jeshua Blanco Guadalupe kusho
Ulwazi lumnandi, njengoba ukufunda kuyithuluzi lokwandisa ulwazi lwethu, ngenxa yalesi sizathu okuqukethwe (isizinda) nendlela okufinyelela ngayo ezandleni zethu futhi kudonse ukunaka kwethu (ifomu) kubaluleke kakhulu.
I-Aai ngokwayo, uma sifuna ukufundwa, ukuthi abafundi bethu bayakwazi ukufaka lokho esifuna ukukuncenga futhi / noma thina njengabafundi siyaqonda, sihlaziye futhi sikhombe lokho esifuna ukwakha ngemva kokufuna ulwazi noma ukumane sicabange ngokufunda.
Phendula uJeshua Blanco Guadalupe